MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE BULL TZU DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Bull Tzu Dog iyo Sawiro
Faransiiska Bulldog / Shih Tzu eeyaha isku dhafan oo isku dhafan
Mia faransiiska Bulldog / Shih Tzu eeyga isku dhafka ah— 'Mia waa madadaalo, ciyaar iyo xanaaq. Waxay jeceshahay inay soo ceshato kubbadaha iyo waxyaabaha ay ku ciyaaraan ee aan u tuurno. Markii ay dhaawacanto ee ay ku faraxsan tahay soo-qaadashada waxay naga dalbaneysaa feejignaan iyadoo leh jilif dhaadheer iyo duufaan haddii ay rabto inaan tuurno kubadeeda ama tooydeeda. Xanaaq iyo qurux waqti isku mid ah. Iyadu waa eey faraxsan oo waxay jeceshahay inay nala salaaxdo sariirta. Waxay saaxiibtinimo u leedahay dadka iyo eeyaha kale. Mia hubaal waa qeyb ka mid ah qoyskeena waxayna jeceshahay inay had iyo jeer nala wareegto. Iyadu waa eey 'digtoon' fiican, waxayna ilaalisaa daarada dambe ee dadka naqdiya xayndaabka ama geedaha. '
Faransiiska Bull Tzu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Bulldog Faransiis iyo Shih Tzu . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Mia Faransiiska Bulldog / Shih Tzu eeyga isku dhafka ah
'Kani waa Yoji, isku darka Faransiiska Bulldog / Shih Tzu. Sawirka koowaad waa iyada 8 toddobaad. Midka labaad, waxay qiyaastii 3 jir tahay. Iyadu waa eey qosol badan, ciyaar badan, macaan oo caqli badan. Waxaan ka helay iyada oo loo yaqaan 'Shih Tzu breeder' oo ku taal Tacoma, WA, oo xayaysiinaysay a qashin ee 'Fuzzy Frenchies.' Waxaan raadinayay arday Faransiis Bulldog ah waqtigaas, waana xiiseynayay, sidaas ayaan wacay. Waxay ahayd jacayl aragtida koowaad. Ma hubo in qashinku uu ahaa shil ama ula kac, laakiin waxay caddeeyeen inay yihiin isku dhafnaan qurux badan oo sifooyin ah. Hooyadeed waxay ahayd Bulldog Faransiis ah oo culeyskiisu culeyskiisu yahay qiyaastii 17 rodol. Waxay lahayd dhibaatooyinka foosha ee caadiga ah ee Frenchie, waxayna u baahan tahay qalliin si ay u keento carruurteeda 3. Yoji walaalkiis sida muuqata wuxuu ugu egyahay iyada, maxaa yeelay milkiilayaashiisii ​​ayaa arkay aniga oo socda maalin maalmaha ka mid ah, wayna i joojiyeen waxayna i weydiiyeen sababta aan u haysto eeygooda. Runtii waxay ku qaateen laba-qaadasho iyada ah, ugu dambayntiina waxaan isla garanay inay ahaayeen qashin-qub. Yoji hadda waa qiyaastii 22 rodol iyo 4 sano jir. Waa gabadh aad u faraxsan, caafimaad qabta. Kaliya eeyga ugu fiican weligiis!
Yoji isku dhafka Faransiiska Bulldog / Shih Tzu (Faransiiska Bull Tzu)
Eeyga Faransiiska ee loo yaqaan 'Bull Tzu Dogs': Sawirro guryo ah oo la ururin karo
xadka collie oo lagu qasay adhijirka australia
toy dahab retriever buuxa koray
jiir Terrier iyo chihuahua eeyo isku dhafan
badh shey badh wiener eyga